Int webata igwe microscope Volt maka ụmụ akwụkwọ na ndị nyocha ka ha gaa n’ihu ịmụ na ịgagharị sayensị na ụlọ - AfricaArXiv
Ewebata Vols Microscope maka ụmụ akwụkwọ na ndị nyocha ka ha gaa n’ihu ịmụ na ịgagharị sayensị n’ụlọ
bipụtara Obasegun Ayodele, Vilsquare CTO on 5th April 2020 5th April 2020
Nzukọ ibe anyị Vilsquare (Nigeria) azụlitere ọkachamara, obere ọnụ ala na obere microscope iji nyere ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ndị nchọpụta aka ka na-achọ ma na-enwe ọ aboutụ maka ịmụ sayensị mgbe ha nọ n'ụlọ n'oge mkpọchi COVID-19.
Maka ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ, enwere ike iji Volt Microscope iji jikọta echiche nke klaasị na ngwa na ezigbo ndụ. Iji maa atụ, n’ime akwụkwọ ọgụgụ ha banyere ndụ ha, ha gụrụ gbasara mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ. Agbanyeghị, ụmụ akwụkwọ ole na ole hụrụla mkpụrụ ndụ na ndụ n'ezie. Site na Volt, ha nwere ike ijikọ oghere ahụ na-efu.
Muta ihe banyere Volt n’ebe a: vilsquare.org/volt
ekele Lablọ nyocha ọha & Mee: maka mmụọ nsọ na nkwado.
Categories:	HardwareMepee Sayensi
Nnukwu Mmeghe Nke Africa na Mmekorita Network Network Civic Mmekorita Nmekorita nke Dijitalụ maka Nnyocha Sayensị na Mitigate COVID-19
Mkpebi dị ka ọnwa nke iri na otu nke ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ n’afọ 11: ngwụcha udo nke CfA na AfricaArXiv Mgbe anyị tụlechara ndị isi ahụ, anyị na ndị AfricaArXiv ahọrọla ịkwụsị mmekorita anyị na Usoro. GỤKWUO…
Colnakọta ego site na maka ọkwa niile nke ndị Africa iji hazie ihe COVID19-nzaghachi sitere na ndị otu Africa na ndị na-eme ihe ike Ọtụtụ puku mmadụ na ọtụtụ narị ndị isi na ndị otu mba ụwa, CBOs, NPOs, gọọmentị na ụlọ ọrụ aka na-arụ ọrụ. GỤKWUO…
Ihe ntinye ORCID na OSF, ScienceOpen na Zenodo site na AfricaArXiv
ORCID na AfricaArXiv na-agbakọ aka inyere ndị sayensị Africa aka n'ịkwalite ọrụ ha site na njirimara ndị pụrụ iche. ORCID na-akwado AfricanArXiv ma na-agba ndị ọkà mmụta sayensị Africa ume - na ndị sayensị abụghị ndị Afrịka na-arụ ọrụ na isiokwu Africa - ịkekọrịta GỤKWUO…
felis Aenean nunc id, justo luctus